Isidumo ngeCoronavirus eThekwini - Ilanga News
Home Izindaba Isidumo ngeCoronavirus eThekwini
Isidumo ngeCoronavirus eThekwini
Kuvalwe ukusebenza kweChina Mall ephakathi edolobheni
KUGASELE amaphoyisa nezisebenzi zeminyango eyahlukene eChina Mall, eThekwini izolo, emuva kokuncizwa indlebe ngokuqhubeka kokusebenza kwale ndawo yize umengameli ememezele ukuba kugonqwe ezweni lonke kuze kube wumhla ka-16 kwephezulu.
KUSUKE isiphithiphithi izolo eChina Mall, eThe-kwini, ngeskhathi kugasela amaphoyisa nezisebenzi zezempilo emuva kokuncinzwa indlebe ngezinsolo zabebekhombisa izimpawu ze-covid-19.
Kudingeke ukuba livalwe leli bhilidi njengoba abomnyango wezempilo bebematasa behlola abebekuleli bhilidi ukuthi kabanayo yini i-covid-19.
Ngokuthola kwephephandaba ILANGA, iziphathimandla zincinzwe indlebe ngabathize abasebenza kuleli bhilidi ababike ukuthi kunezisebenzi ezivalelwe ngaphakathi yize umengameli ememezele ukuthi kumele kume yonke into izinsuku eziwu-21.
Kuthiwa bekunezinsolo zokuthi kunabakhombisa izimpawu zaleli gciwane, okwenze kwagcina kuhlolwa abebephakathi.
Kwenzeka lokhu nje, umnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi ngokubambisana namaphoyisa, ngeSonto bavundulule ifemu eDurban North, ebivalele izisebenzi ngoba izama ukuqhuba umsebenzi wokwakha ama-mask okuzivikela kwi-coronavirus.
Lokhu kuholele ekuboshweni komnikazi wayo le femu, wadedelwa ngebheyili ngokuqala kwesonto.
UMnu Ndabezinhle Sibiya womnyango wezokuThuthukiswa koMnotho KwaZulu-Natal, utshele leli phephandaba ukuthi njengoba ungqongqoshe Nomusa Dube-Ncube, ematasa ehambela izindawo ezahlukene ngomkhankaso wokulwisana nabamabhizinisi abanyusa intengo yokudla nezimpahla kulesi sikhathi esinzima, bathole ucingo komunye wezisebenzi ebahlebela ngokuvalelwa kwezisebenzi kuleli bhilidi.
“Emuva kokuba ungqongqoshe ethole ngalokhu, uxhumane nokhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal, kwabe sekuqalwa uphenyo ngale ndawo.
Esikutholile wukuthi bekuqhu-beka ukusebenza kule ndawo kanti njengamanje amaphoyisa nezisebenzi zezempilo bamatasa babheka isimo sempilo yabantu abebengaphakathi,” kusho uMnu Sibiya.
Okhulumela umnyango weziSebenzi KwaZulu-Natal, uMnu Nhlanhla Khumalo, uthe kazikho izisebenzi ezitholakale kuleli bhilidi.
Okhulumela amaphoyisa kuzwelonke, uBrigadier Vishnu Naidoo, uthe akekho oboshiwe, bekuhlolwa ukuthi iyalandelwa yonke yini imigudu yokusebenza.
Previous articlelufihlwa kusasa ngezinkonzo ezimbili uqweqwe lwentatheli
Next articlei-pirates ihlela ukukhomba indlela unozinti wase-france